Boka FaceTime richaramba rakaremara muIOS 12.1.3 uye pakutanga | IPhone nhau
Ranga riri dambudziko raApple muna2019, iyo Yakakomba Boka FaceTime yakavanzika uye yekuchengetedza nyaya. Dambudziko rakatitendera teerera kune vamwe vanhu kuburikidza neFaceTime app vasati vatombogamuchira kufona kwedu. Chinhu chisina kugamuchirwa chakatungamira vakomana kubva kuCupertino kumisa sevhisi kune vese vashandisi.
Apple yakumbira ruregerero, uye yakabvuma mushandisi kuti ivo vakaona iyo Group FaceTime yekuchengetedza nyaya, uye zviri pachena kuti vari kushanda kuti vazvigadzirise. Iyo kururamisa kwedambudziko kunouya kubva paruoko rwekuvandudza nyowani, uye tinogona kusimbisa izvozvo mumashanduro pamberi peiyi nyowani yekuvandudza Boka FaceTime icharamba yakaremara… Mushure mekusvetuka tinokupa zvese izvo zvirongwa zveApple kugadzirisa dambudziko rakakomba rekuchengetedza reGroup FaceTime
Sezvatinokuudza, Boka FaceTime richaramba rakaremara mune iOS vhezheni 12.1.3 uye pakutanga zvakajeka. Kana isu tichida kunakidzwa neiyi nyowani FaceTime ficha isu tichafanirae kugadzirisa zvishandiso zvedu kune inotevera vhezheni yeIOS iyo Apple inotanga panguva ino svondo rinouya, zvinofungidzirwa kuti zvitsva iOS 12.1.4.
Isu takagadzirisa iyo Boka FaceTime chengetedzo nyaya pane Apple maseva, isu tinosunungura software yekuvandudza iyo nyowani Boka FaceTime kune vese vashandisi svondo rinouya.
Kunze kweizvi zvese, Boka FaceTime zvakare ichave neyese nyaya dzekuchengetedza dzakagadziriswa mune inotevera iOS 12.2 beta sezvo ichi chichava chikuru chinotevera chekushandisa system chatinoona pane edu nhare mbozha. Tichaona zvese izvi, tinovimba Apple inoburitsa iyo nyowani iOS 12.1.4 nekukurumidza sezvazvinogona nekuti iyi nyowani yeFaceTime ficha yainakidza uye chokwadi ndechekuti yakashanda mushe. Ticharamba tichikuzivisa iwe, uye isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza kana Apple yaburitsa iOS 12.1.4
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Boka FaceTime richaramba rakaremara muIOS 12.1.3 uye pakutanga
uyezve vashandisi vachamanikidzwa hongu kana hongu kugadzirisa, panzvimbo pekutanga kugadzirisa kweFaceTime application ... uye vashandisi vevashanduri vekare, vasingadzoreke ...
Pindura kuna abeluko
Zvinyorwa zvisati zvaitika iOS 12 haina Group FaceTime, saka iyi bhagi haivakanganise uye ivo havafanirwe kugadzirisa.